PC မပါဘဲ Root Master နဲ့ Android ကို Root လုပ်နည်း Androidsis
Android ကို Root လုပ်နည်း
အက်ဒါဖာရီနို | | Android Root ပါ, Android cheat, လဲ tutorial
Android လည်ပတ်မှုစနစ်ကကျွန်ုပ်တို့အားအရာရာတိုင်းကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားသော်လည်းအချို့သောကန့်သတ်ချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းတွေ့နိုင်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Super-user ကိုရရှိပါကသို့မဟုတ် Android, Root တွင်ပိုသိသည်ဆိုပါကဤကန့်သတ်ချက်များကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် Android ကို root လုပ်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စက်ကို root လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသောကိရိယာများသည် PC အတွက်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုမည့် application များလည်းရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းကနေ root သို့မဟုတ်တက်ဘလက်။
ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Root နှင့်ဆက်နွှယ်သောအရာများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှင်းပြရန်ကြိုးစားပါမည် Android ကို root လုပ်ပါ။ Root ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းရှင်းပြပါမယ်။ Root Master လို PC ကိုသုံးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတွန်းအားပေးသောကိရိယာများနှင့်အလုပ်မပါဘဲလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုမည့်အခြားကိရိယာများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများ Root သို့လျှောက်လွှာအချို့အကြောင်းပြောပါမည်။ က။
1 Android တွင် root အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းသည်ဘာလဲ။
2 Android မှာ root လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံး app များ
3 Android ကို Root Master နဲ့ Root လုပ်နည်း
5 အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အမြစ်မဟုတ်ပါကဘာလဲ
6 ဖုန်းကို root လုပ်ဖို့အန္တရာယ်ရှိသလား။
8 အကယ်၍ root android ပြီးနောက် update လုပ်လို့မရရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
9 rooting မတိုင်မီစိတ်ထဲထားရန်သိကောင်းစရာများ
Android တွင် root အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းသည်ဘာလဲ။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲ Android မှာကျွန်ုပ်တို့မှာဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသော်လည်းအကန့်အသတ်ရှိတယ်။ Linux အခြေခံသော operating system တစ်ခုအနေဖြင့်အချို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည် အထူးခွင့်ပြုချက်။ ဥပမာအားဖြင့်, လျှောက်လွှာ Cerberus ၎င်းသည်ခိုးယူခံရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းစက်သည် Root လုပ်ထားမှသာလျှင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ Cerberus ကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Android ကိရိယာတစ်ခု၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသုံးပြုလိုပါက၎င်းကို root လုပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များ (bloatware) ကိုဖယ်ရှားပါ။
(ဥပမာစကားဝှက်များကိုပြန်လည်ရယူခြင်းကဲ့သို့) Root မပါဘဲမရရှိနိုင်သည့် Wi-Fi လုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
ပိုမိုပြည့်စုံသောအရံသိမ်းဆည်းမှုများ (ဥပမာ - ကိရိယာများကို သုံး၍) လုပ်ဆောင်ပါ Titanium Backup).
Android မှာ root လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံး app များ
ဒါဇင်ပေါင်းများစွာရှိသည် Android ဖုန်းကို root လုပ်ခွင့်ပေးတဲ့ application တွေ, ဒါပေမယ့်ငါကအောက်ပါမီးမောင်းထိုးပြလိမ့်မယ်။
VRoot ပါ။။ အကျော်ကြားဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးတစ်ခုမှာ VRoot ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ထုတ်ကုန်များကို Root လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးသောအခြား application များနည်းတူ၎င်းသည်အသုံးပြုရန်အလွန်ရိုးရှင်းသော်လည်း၎င်းသည် PC အတွက်သာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Android ၏မည်သည့် version ကိုမဆို (၂.၂ မှလက်ရှိဗားရှင်းအထိ) အတွက်လမ်းခရီးကိုပြန်လှည့်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဆောင်ရွက်သည်။
Kingo အမြစ်။ ၎င်းသည်ယခင် app ကဲ့သို့ထိရောက်သော application တစ်ခုဖြစ်ပြီး VRoot သည်ပိုမိုမြင့်မားသောအောင်မြင်မှုနှုန်းရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ၎င်းသည်အန်းဒရွိုက်ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များနှင့်ပြန်လည်အလုပ်လုပ်ခြင်း (unroot ဟုလူသိများသော) ကိုပြန်သွားရာတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။
ဘောင်းဘီ။ ကွန်ပျူတာမလိုအပ်သော application တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်ယခင် tools များကဲ့သို့ devices များသို့မဟုတ် brand များပေါ်တွင်အလုပ်မလုပ်သော်လည်း၎င်းကိုစဉ်းစားရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ In ဒီနည်းကို Link သင့်မှာ Framaroot နဲ့ Android device ကိုဘယ်လို root လုပ်ရမယ်ဆိုတာရှင်းပြတဲ့ post တစ်ခုရှိတယ်။
KingRoot ။ PC ကိုမှီခိုစရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ Android စက်ကို root လုပ်ရန်နောက်ထပ် application တစ်ခု။ သူတို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်၎င်းတို့သည် ၁၀၃,၇၉၀ တွင်မတူညီသောထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သင်တို့တွင်သူတပါးတို့သည်ခံကြမည်လော။
[APK] iRoot၊ Android မပါဘဲ Android ဖုန်းကို PC မသွင်းဘဲ root လုပ်နည်း
ဒီ app တွေထဲကတစ်ခုကခင်ဗျား Android mobile or tablet ကိုဘယ်လို root လုပ်မလဲဆိုတာလေ့လာပါလိမ့်မယ်။ မင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင် Samsung ကို root လုပ်တယ်ဤအက်ပ်များသည်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်များနှင့်လည်းသဟဇာတဖြစ်သည်။
Android ကို Root Master နဲ့ Root လုပ်နည်း
ရှင်းပြရန်သွားမီ Android ကို Root လုပ်နည်း Root Master နဲ့အတူမင်းကိုပို့စ်တင်ပါ Android တည်ရှိမှုသံသယ; အမြစ်တွယ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အမြစ်မကျဖို့လား အဲဒါမေးခွန်းပဲ ငါ၏အလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Francisco ကသူ့နေ့ရက်ကာလ၌ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Android Device ကို Root လုပ်ခြင်းဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏အာမခံချက်ကိုအသုံးပြုလိုပါက၎င်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ငြင်းဆန်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သတိပြုရန်အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းသည်အသုံးအများဆုံးမဟုတ်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ပစ္စည်း၏ cache များအားလုံးကိုရယူနိုင်သည့်နည်းတူကျွန်ုပ်တို့အတွက်လည်းတံခါးဖွင့်သည် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ software မင်းတို့လုပ်သမျှကာလပတ်လုံးငါတို့လုပ်ပြပြီးမင်းကိုခွင့်ပြုချက်ပေးတယ် (မသိဘူးဆိုရင်ငါတို့လုပ်မှာပါ)
အထက်ပါဖော်ပြချက်ကိုသင်ဖတ်ပြီးပြီးပြီနှင့်သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလျှင်သင်ပထမ ဦး ဆုံးသိသင့်သည်မှာ Root Master ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ Android ဗားရှင်း 1.5 နှင့် 5.x။ သတိပြုသင့်သည်မှာဤနည်းလမ်းသည်အမြစ်တွယ်နေသောသတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိရိယာမရှိသောဆိပ်ကမ်းများအတွက်သာအကြံပြုသည်။ Framaroot u OdinSamsung အတွက်ဒုတိယ သင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပါကအောက်ပါအဆင့်များမှာ -
ကျနော်တို့ကနေ Root Master .apk ကို download လုပ် ဒီနည်းကို Link.
Root Master .apk ကို install လုပ်ပါပြီ။
ကျနော်တို့လျှောက်လွှာကို run ။ ကျနော်တို့ဖမ်းယူ၏ပထမ ဦး ဆုံးကဲ့သို့မျက်နှာပြင်မြင်လိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းနှင့်လိုက်ဖက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်စောင့်နေပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်သည် Root Master နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါကအခြားဖန်သားပြင်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်။ « Root »ဆိုသောခလုတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထိရမည်။
လျှောက်လွှာကိုကိရိယာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်စောင့်ဆိုင်းနေပြီး၎င်းတွင် "Root" ဟူသောစကားလုံးကိုလည်းတွေ့ရလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ "Root ။ " ပေါ်တွင်ကစားခဲ့ပါတယ်
လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသောအခါကျန်ရှိသောအရာအားလုံးသည်ခရမ်းရောင်ခလုတ်ကိုထိရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Rooted device ကိုကျွန်ုပ်တို့ရလိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်တစ်ခုတော့မရှိသေးပါဘူး။ Root Master နဲ့ Rooting ပြီးသွားရင် SuperSu ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ application အသစ်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ အဆင်မပြေတာကဒီအပလီကေးရှင်းကိုတရုတ်ဘာသာနဲ့ရနိုင်တယ်။ ပြtheနာပေါ်လာရင် Google Play ကိုသွားပြီး SuperSu (သို့) Superusuario ကိုစပိန်လိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတာ။
ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုသောနောက်ထပ်အလားတူ option ကို PC ပေါ် မူတည်၍ Android ကို root လုပ်ခြင်းသည် iRoot ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Root Master ထက်ပိုမိုခေတ်မီသောအသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ပို့စ်တွင်၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုရှင်းပြထားသောသင်ခန်းစာတစ်ခုရှိသည် iRoot, PC များမလိုဘဲ Android ဆိပ်ကမ်းများအမြောက်အများကို root လုပ်ပါ။ ထို့အပြင်ထို post တွင်ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း "device ကို root လုပ်နည်း" အမျိုးအစား Androidsis တွင်ရှာဖွေခြင်းသည်ကိုးကားခြင်းများမပြုလုပ်ဘဲ "[device]" ကို Root လုပ်လိုသော device ဖြင့်ရှာဖွေခြင်းသည်သတင်းအချက်အလက်ကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ မည်သည့် Android device ကိုမဆို root လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်လည်းနှိပ်နိုင်သည် ဒီနည်းကို Link ငါတို့မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသောကွဲပြားခြားနားသောပို့စ်များကိုလေ့လာကြည့်ပါ။
သငျသညျပြီးသားကိုသိ android ကို root လုပ်နည်း ဒီသို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းများနှင့်အတူ? မှတ်ချက်များအတွက်သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုစွန့်ခွာရန်အခမဲ့ခံစားရသည်။
သင်၏ Android ဖုန်းကို root လုပ်သည်မဟုတ်သံသယရှိနေနိုင်သည်။ သင်တစ်စုံတစ် ဦး ထံမှဖုန်းကို ၀ ယ်လိုက်လျှင်ဖြစ်နိုင်သောအရာ။ သင်သိလိုလျှင်ရှာဖွေရန်အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများရှိသည်။ စစ်ဆေးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ app တစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီ application ကို Root Checker လို့ခေါ်တယ်။
ဒီ application ကိုသင် download လုပ်နိုင်သည် ဒီ linkသင်သည်အမြစ်ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ သင်၏ Android ဖုန်းတွင် app ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏အတွင်းပိုင်းတွင်သင်သည်သင်၏ကိရိယာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ခွင့်ပြုသည့်ခလုတ်ကိုတွေ့သည်။ ဒါကြောင့်၊ အကယ်၍ သင်သည် root လားမဟုတ်သည်ကိုသင်ပြောလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သိရန်လွယ်ကူပြီးအချိန်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် root user တစ်ယောက်မဟုတ်ပါက superuser permissions ကိုလက်လှမ်းမမှီပါဟုယူဆသည်။ Android မှာ root လုပ်တဲ့သူတွေက root directory ကိုသွားတယ် operating system ကို install လုပ်သောအပေါ်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပြောထားသည့်ဖိုင်များကိုအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောင်းလဲမှုများစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ အကယ်၍ သင်သည်အမြစ်မဟုတ်လျှင်၎င်းသည်သင်၌ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပါ။ သင့်အန်းဒရွိုက်ဖုန်း၏အချို့ရှုထောင့်များကိုပြုပြင်ရန်ခွင့်ပြုထားသောဤဖိုင်များကိုမသုံးဘဲသင်၏ Android ဖုန်းကိုသာမန်အားဖြင့်ပုံမှန်သုံးနိုင်သည်။
ဖုန်းကို root လုပ်ဖို့အန္တရာယ်ရှိသလား။
သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းကို root ပြုလုပ်ခြင်းသည်သင့်အားအားသာချက်များနှင့်ထပ်ဆောင်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုများစွာပေးနိုင်သည်။ လျစ်လျူရှု။ မရသည့်အန္တရာယ်များစွာလည်းရှိသော်လည်း။ ပထမ ဦး စွာ၊ သင်သည်သင်၏ဖုန်းပေါ်တွင် application တစ်ခုကိုထည့်သွင်းပါက၎င်းကို device ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုချက်အချို့တောင်းခံလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည် root user တစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်၊ system file များအားလုံးကို application တစ်ခုကို access လုပ်သည်။ ဒီအပလီကေးရှင်းမှာလုပ်ဆောင်ချက်ကန့်သတ်ချက်မရှိဘူး၊ သူတို့ကအရာရာတိုင်းကိုရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုယူဆသည်။ အထူးသဖြင့်သင့်တွင်အန္တရာယ်ရှိသည့် application တပ်ဆင်ထားပါကအလွန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်သင်လုပ်ချင်သမျှကိုလုပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Android ကို rooting လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကရှုပ်ထွေးတယ်။ ထို့ကြောင့်အတွေ့အကြုံနည်းပါးသောသုံးစွဲသူများအားထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အကြံပြုခြင်းမပြုပါ။ အမှားတစ်ခုပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းအတွက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ သင်၏ root ကိုတပြိုင်နက် install လုပ်ထားသည့်အရာများ၊ ခွင့်ပြုချက်များသို့မဟုတ်သင်ကိုင်တွယ်သောဖိုင်များနှင့်အလွန်သတိထားရမည်။
ထို့ကြောင့်သင့် Android ဖုန်းကို root လုပ်ပါ ဒါဟာစဉ်းစားရန်ရှိသည်သောအရာတစ်ခုခုသည် မလုပ်မီ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်နောင်တရခဲ့လျှင်ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်မလွယ်ကူပါ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အချို့သောအခါသမယတွင်သင်သည်ဤခေါင်းစဉ်အကြောင်းကိုကြားဖူးတယ်။ ၎င်းသည်အမြစ်တွယ်လာသောအခါအရှုပ်ထွေးဆုံးပြissuesနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖြစ် သင်၏ Android ဖုန်း၏အာမခံကိုသင်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့် 100% အချို့သောမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်စားသုံးသူများအကြားတွင်သံသယများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဒါဟာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဘို့မှန်ပေမယ့်သင်ဥရောပသမဂ္ဂ၏ညွှန်ကြားချက်ကိုသိလျှင်, ဒီအတားအဆီးဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံ၏နေထိုင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်ဖုန်းဝယ်ယူပါကအခြေအနေသည်အတော်လေးရှုပ်ထွေးသည်။ ဒါ့အပြင် ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်တစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်လုပ်သူပေါ်တွင်မူတည်သည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလမ်းကြောင်းသစ်ကြောင်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့် ဤကိစ်စတှငျလျော့နည်းခွင့်ဖြစ်လာကြပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင့်မှာ Samsung ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပြcaseနာတစ်ခုရှိရင်၊ သူတို့ကပထမဆုံးကြည့်တာကသင်ဟာအမြစ်တွယ်နေမနေဆိုတာပဲ။ သို့ဆိုလျှင်ပြင်ဆင်မှုသည်အာမခံအောက်တွင်မရှိတော့ပါ။ အသုံးပြုသူအတွက်ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်နိုင်သည့်အရာ။ သို့သော်မည်သည့်ထုတ်လုပ်သူမဆိုသင်အမြစ်ဖြစ်ပါကအလွယ်တကူသိရှိနိုင်လိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ထုတ်လုပ်သူအပေါ်မူတည်တယ်။ ၎င်းသည်တကယ့်စွန့်စားမှုဖြစ်သော်လည်းအမြစ်တွယ်သောအခါသင်အာမခံချက်ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ အခုအချိန်မှာ ရှင်းလင်းသောမူဝါဒမရှိပါ ဒီသဘောမျိုးဖြင့် သံသယဖြစ်ပါကထုတ်လုပ်သူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအမြဲတမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် အမြစ်ဖုံးကွယ် မည်သည့် application ကမဆိုစူပါအသုံးပြုသူဖြစ်ခြင်းအတွက်ပြproblemsနာဖြစ်စေသည်။
အကယ်၍ root android ပြီးနောက် update လုပ်လို့မရရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
root လုပ်တဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နိူင်တဲ့အဓိကပြproblemsနာများနောက်တစ်ခု။ သင်သည်သင်၏ဖုန်းတွင်ဤအရာကိုပြုလုပ်သောအခါ update update သည်များသောအားဖြင့်ပျောက်သွားသည်။ ဒါကြောင့်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ချင်းစီအပေါ်အများကြီးမူတည်ပေမယ့်။ ထို့ကြောင့်၊ ပုံမှန်အားဖြင့်ဖုန်းပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံသောအရာဖြစ်သည့် OTA updates များသည်လက်ခံခြင်းကိုရပ်တန့်သည်။
ဤ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မွမ်းမံမှုများရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတွန်းအားပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့် APK ပုံစံဖြင့်သင်ဤ update ကိုကိုယ်တိုင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သောစာမျက်နှာများရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အန္တရာယ်များစွာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ Android လိုလုံခြုံတဲ့ update တစ်ခုလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ဒါ့အပြင်၎င်းကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ဖုန်းမှ root လုပ်ခြင်းကိုအများဆုံးဖယ်ရှားပေးလိမ့်မယ်။
ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်အသစ်ပြောင်းခြင်းတစ်ခုကိုသွင်းပြီးသည်နှင့်ထပ်မံ root လုပ်ရန်လိုလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနောက်တဖန်သွားရန်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဒီသဘောအရမွမ်းမံချက်တွေရဖို့၊ တပ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲစေတဲ့အားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။
အကယ်၍ သင်၏ Android ဖုန်းကို root လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီဆိုလျှင်လုပ်ငန်းစဉ်မစတင်မီသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များစွာရှိသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်တော့မည်ဆိုပါကသင့်အနေဖြင့်ပြproblemsနာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
မစတင်မီ သင့်တွင်အနည်းဆုံး ၆၀% ဘက်ထရီရှိကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ရှည်လျားပြီးအချိန်ကုန်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဘက်ထရီအားနည်းတာနဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်ဘူး။ ဒီဟာကပြproblemsနာဖြစ်စေနိုင်တယ်၊ (သို့) သင်ပြီးအောင်လုပ်လို့မရဘူး။
အကယ်၍ သင်သည်ကွန်ပျူတာနှင့်အမြစ်တွယ်နေလျှင်၊ လက်တော့ပ်သုံးတာကပိုကောင်းတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်လက်ရှိအပေါ်မှီခိုပါဘူး။ အကယ်၍ ကွန်ပျူတာပိတ်သွားလျှင်၊ ပါဝါပြတ်တောက်သွားသောကြောင့်ဖုန်းအားပြန်လည်ပြုပြင်။ မရနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ဤကိစ္စတွင်လက်တော့ပ်ပိုမိုလုံခြုံသည်။
သင် root လုပ်သောအခါ၊ ဖုန်းထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသောအချက်အလက်များကိုမဖျက်ပါ။ သင်၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်တွင်ရှိသည့်အရာများနှင့် SD ထဲတွင်ရှိသည့်အရာများမပါဝင်ပါ။ သင်မိတ္တူကူးယူလိုပါက၎င်းသည်လုံခြုံမှုအတွက်ကောင်းသော်လည်း၎င်းတို့သည်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ Android ဖုန်းတွင် root အသုံးပြုသူဖြစ်သော်လည်းသင်အားသာချက်များကိုမတွေ့ပါက၎င်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်သင်၏ဖုန်းကို root လုပ်သည့်အခါသင်အသုံးပြုသော ROM ပေါ် မူတည်၍ ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိသည်။
ROM များကိုသင်တိုက်ရိုက်အမြစ်တွယ်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ ၎င်းတို့တွင်သင့်အားပြောင်းလဲမှုကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ဖုန်းကိုမူလအခြေအနေသို့ပြန်ပို့ရန်ကူညီသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ ၎င်းသည် Unroot ဟုခေါ်သော function တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် Custom ROM များအားလုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောအရာမဟုတ်ပါ။
ဒါ့အပြင်အခြား application များကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ES Explorer ကဲ့သို့သောဖိုင်စူးစမ်းရှာဖွေသူများသည် root folders များကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့်ဖုန်းကိုပြန်လည်စတင်သောအခါဖုန်းကိုမူလအခြေအနေအတိုင်းပြန်လည်ရောက်ရှိစေသည်။ Play Store တွင်သင်ဖုန်းအားလုံး၏ root ကိုပြောင်းပြန်လုပ်ရန်နောက်ထပ် app တစ်ခုရှိသည်။ သင်၎င်းကိုကူးယူနိုင်သည် aquí။
သင်တပ်ဆင်ထားသူကသင့်အားဤဖြစ်နိုင်ခြေကိုမပေးလျှင်၊ သင်ကိုယ်တိုင်၎င်းကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ သင်လုပ်ရမှာကမူလ firmware ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းပါ။ အချို့သောထုတ်လုပ်သူများကအသုံးပြုသူများကိုသူတို့ရှိခဲ့သည့် firmware ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်အမြစ်ကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android Root ပါ » Android ကို Root လုပ်နည်း
183 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ဖုန်းမှသတင်းအချက်အလက်များကိုဖျက်ပစ်ပါသလား။ ငါ၏အ Nexus5အတွက်သင်က၎င်းကိုလှည့်ရန်လိုအပ်လျှင်ပုံသွင်းရမည်။ ငါမလိုချင်ပါ
အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ post ။ ၂ မိနစ်အတွင်းကျွန်တော့်ရဲ့ Optimus Lite ကိုအံ့သြလောက်အောင်အမြစ်တွယ်ခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ဘယ် application ကိုသုံးခဲ့တာလဲ
ငါ update လုပ်ပြီးကတည်းကအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့အချိန်ကတည်းကငါ့ galaxi s4 မှာ andrid ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲ
ကျွန်ုပ်မေးခွန်းကိုဆက်သွယ်သည်၊ ဤနည်းဖြင့် rooting သည် format ချခြင်းပါဝင်သလား။
ဤနည်းလမ်းသည်မည်သည့်ဒေတာကို format လုပ်၍ မဖျက်ပါ။
Kevin Vargas ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေ၊ ကျွန်ုပ်မှာ galaxy s2 t989 ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကဆဲလ်ဖုန်းကို hercules လို့ပြောတယ်။ မင်းကငါ့ရဲ့ androit version ကိုပြောင်းဖို့အဲဒီ app ကိုသုံးနိုင်တယ်လို့မင်းထင်တယ်။ မင်းရဲ့အဖြေကိုစောင့်နေတယ်
kevin vargas အားပြန်ကြားပါ
Hello Francisco, သင်သည်ငါ့ကို Samsung Galaxy Ace4၀ ယ်ရန်ကူညီနိုင်ပါသလား။ ခိုးယူခံရသည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အား၎င်းကိုရောင်းချခဲ့သူ (သူငယ်ချင်းဟောင်း) ကတာဝန်ခံယူမည်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် imie ကိုမည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်မည်နည်း။ အဲဒါကိုသုံးလို့ရလား
သူက Nexus4နဲ့သဟဇာတလား? အာမခံပြီးသွားရင်အာမခံချက်ပျောက်သွားပါသလား။
ငါ့မှာ xperia s ရှိတယ်၊ ဘာအတွက် rooting လဲ။ ဘက်ထရီရဲ့အရှိန်နဲ့ကြာချိန်အတွက်ကောင်းသလား။
အနီရောင်ခလုတ်နှင့်ခရမ်းရောင်သို့မဟုတ်ခရမ်းရောင်တစ်ခုရှိပါကသင်သည်“ ခရမ်းရောင်ခလုတ်” ကိုရေးလိုသည်၊ ၎င်းတွင်ခရမ်းရောင်သည်“ ချိုးဖောက်ထားသည့်ဆွဲဆောင်သောအနီရောင်အရောင်” ကိုဆိုလိုသည်။
XT890 သို့မဟုတ် Razr I တွင်၊ အဆုံး၌ခရမ်းရောင်ခလုတ်တစ်ခုသာထွက်လာသည်။ ပြီးတော့ဒါကအမြစ်မရှိပါဘူး
Giora အသေးအဖွဲ ဟုသူကပြောသည်
Deluxe သည် Samsung Tab3တက်ဘလက်တွင်ကောင်းမွန်သည်။
Giora Minor သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ Giovanni၊ သင့်တွင် Android 210 ပါသော ST-4.1.2 ရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်ကအာဂျင်တီးနားမှအန်းဒရက်စ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
wow ကမှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သည်။
Adrian ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း ဟုသူကပြောသည်
Nexus7၂၀၁၂ တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ
Adrián Gracia အားပြန်ပြောပါ
Play Store ထဲသို့ ၀ င်ပြီး SuperSu ကိုသွင်းပါ
ကျွန်တော့်အဖြစ်အပျက်မှာပဲ၊ လှည့်ပြီးတဲ့နောက်၊ ကျွန်တော့်ဘာသာစကားနဲ့ supersu ကို install လုပ်တယ်၊ ဖွင့်တယ်၊ binaries ကို update လုပ်တယ်။ ပြီးတော့ Android menu, settings, applications တွေ၊ applications တွေအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ တရုတ်အမြစ်ကပိတ်။ ထိုအရပ်မှ supersu အမြစ်ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုရှာမတွေ့ပါ
ကျွန်တော့် s3 mini မှာကျွန်တော့်အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။
ငါ root master ကို install လုပ်ပြီးပါကသူ့ကို enable လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် font လို့ခေါ်တဲ့ application တစ်ခုကို download လုပ်ပြီး interface ၏စာကိုပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ lg g2 သည်သူ့ဟာသူ rebooted ပြီး message နှင့်အတူ screenshots များကိုစတင်သောအခါ - ကြိုဆိုသည်။ ရှင်းလင်းဖို့: အကြိမ်ကြိမ်နှင့်ကနာရီဝက်ကြာပါသည်။ ငါကပိတ်ထားပြီးပြန်လာနှင့်လာနှင့်အတူတူပင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပေါ်လာတဲ့စောင့်ရှောက်။
ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းများသည်သင်၏လည်ပတ်ရေးစနစ်ကိုပျက်စီးစေသလားဟုကျွန်ုပ်ပြောပါသည်။ အာမခံပျက်သွားသလား ဒါကိုကျွန်ုပ်ဘဝကိုဘယ်လိုပြန်ယူလာမလဲ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ။
andnodsis ကို umn မူရင်း firmware ကို offline mode ဖြင့် flash လုပ်ရန်ရှာဖွေပါ။ ၎င်းသည်သင်ထပ်မံအသက်ဝင်ပါလိမ့်မည်။
ငါ root လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် super root လုပ်လိုက်တာနဲ့ root super checker ကိုကူးယူလိုက်တယ်။ root root ကိုငါက root root မဟုတ်သေးဘူးလို့ငါပြောခဲ့တယ်။ တရုတ် root ကိုငါဖယ်ထုတ်နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းကတော့ကျွန်တော့်ရဲ့တရားဝင် rom ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်။ အခြားအသုံးအနှုန်းတစ်ခုမှာ odin ကငါ့မော်ဒယ် samsung galaxy mega 6.3 att အတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူး
ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) တမျိုးတည်းဖြင့်အမြစ်တွယ်နေနိုင်သလား။
Nexus 5. Android 4.4.2 ။ ဒါအလုပ်မလုပ်ဘူး
Luri olete ဟုသူကပြောသည်
Luri Olete အားစာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်၏ lg g2 d805 Claro Colombia မှကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည်ကြိုတင်တင်ထားသည့် application များကိုနေရာယူရန်သာဖျက်ပစ်ပြီးပါပြီ။ ဤသင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်ုပ်အခြားအောင်မြင်မှုများမအောင်မြင်ဘဲ
Adolfo Quevedo အားပြန်ပြောပါ
Dahaka Dunkelheit ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည်အာဂျင်တီးနားထုတ်လုပ်မှု၏ noblex t7014 တက်ဘလက်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လျှို့ဝှက်ဖုံးကွယ်ထားသည့် Hisense sero7lite မဟုတ်သည့်တရုတ်တက်ဘလက် မှလွဲ၍ ... rooting သည်ရိုးရှင်းပြီး၎င်းကိုပြန်လည်စတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ root checker နဲ့သူတို့ကသူတို့ root ဆိုတာမရှိဘူး။ တရုတ် root manager ကြောင့်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ သူတို့ကသူတို့ကစားတဲ့တရုတ်စကားနားမလည်တာကြောင့် root checker ကို root access ခွင့်ပြုချင်လားလို့ငါမေးတဲ့အခါသေချာတာပေါ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ root access ကို chke လုပ်ဖို့ application ကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီ။ တရုတ်စီမံခန့်ခွဲမှု application ကိုဝင်တဲ့အခါအရောင်တွေကိုလမ်းညွှန်ပေးမယ်။ တရုတ်အက္ခရာများအနီရောင်ဖြစ်နေရင်ဒီ app မှာ root permissions မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် Supersu ကိုအမြစ်တွယ်ပြီးအမြန်ဆုံး download လုပ်ပါ။ သတိပြုရန်မှာ၊ တရုတ် application သည် Supersu သည် root access ကိုလိုချင်သည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်ခွင့်ပြုသည်ကိုကောင်းစွာကြည့်ပါ၊ ထို့နောက် application ၏ settings မှပိတ်ထားပြီးသင်၏ခွင့်ပြုချက်ကို supersu နှင့်ပိတ်ပါ။ အမိန့် .. နှင့် di ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ဖောင့်များကိုမကူးပါနှင့်။ အကယ်၍ lg အသုံးပြုသူကဲ့သို့ထပ်တူဖြစ်မှုမရှိပါက ROM သည်၎င်းတို့ကိုထောက်ပံ့ရန်သေချာစွာလိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သောတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Dahaka Dunkelheit အားပြန်ပြောပါ
ok francisco နှင့်သင်၏ကောင်စီများ၏ခြေလှမ်းများကိုလိုက်ပြီးနောက်ငါ၌တူညီသောတစ်ခုတည်းရှိသောကြောင့်သင်တက်ဘလက်ကိုကျွန်ုပ်ပြုမည်။ ဤပြွန်သည်သင့်အားအဆင်ပြေစေခြင်းရှိမရှိ၊ သင် application များစွာကိုဒေါင်းလုပ်ချနိုင်လျှင်၎င်းကိုသင်သို့လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်ကိုသိလိုသည်။ ကဒ်လား ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!!
Motorola တွင် moto g သည်ခရမ်းရောင်ခလုတ်တစ်ခုသာထွက်ပေါ်သည်။ ပြီးတော့ဒါကအမြစ်မရှိပါဘူး
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက် xperia z တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ ခရမ်းရောင်ခလုတ်တစ်ခုပေါ်လာသည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည် - i-joi (i-Call 350); Super Su ကို install လုပ်သည့်အခါ binaries များကို update လုပ်ရန်အတွက်သာသူသည်ငါ့ကို = herror ကိုပေးသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်… Root Checker Basic ကိုတပ်ဆင်သည့်အခါ… .SI က“ Congratulations ဒီ device မှာ root acces ရှိတယ်” tells ငါ့ကိုပြောတယ်¿¿¿¿¿
NoTE II မှာအလုပ်မလုပ်ဘူး။ Saumsung ရဲ့လုံခြုံရေးအသစ်မှာအမှားအယွင်းရှိတယ်။ သူမက hehehe ဘာကိုပြောတယ်ဆိုတာသိတဲ့ခရမ်းရောင်ခလုတ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။
နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ကြိုးစားပြီးနောက်နောက်ဆုံးတွင် Lg7ဂျယ်လီ bean ကိုပြုပြင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါ့မှာ adus 10,1 ပါတဲ့ asus memo pad fhd 4.3 ရှိတယ်။ ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ root မလုပ်ဘူး။ အဆင့်တွေကိုမလုပ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် root မလုပ်ဘူး။
Ramses Garcia ဟုသူကပြောသည်
ဒါဟာငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့လွယ်ကူမြန်ဆန်ရိုးရှင်း !! ငါများသောအားဖြင့်မှတ်ချက်မပေးပါဘူး ငါကောင်းမကောင်းကိုစောင့်ရှောက်! ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခါတော့ငါက LG pro Lite နဲ့ခရမ်းရောင်ကိုမှတ်ချက်ပေးတဲ့သူတွေအတွက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်၊ ငါ့ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာအနီရောင်၊ ငါ့ညာဘက်မှာခရမ်းရောင်က = ခရမ်းရောင်ပါ။ hahaha ဘာနိဂုံးချုပ်နှင့်ကံကောင်းပါစေ!
အလက်ဇန်းဒါး De La Asuncion ဟုသူကပြောသည်
ငါ GT-P3113 galaxy tab ကိုအမြစ်တွယ်လိုက်တာနဲ့ဘာမှ format မလုပ်၊ ဖျက်ပစ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!!!
Alexander De La Asuncion ကိုပြန်သွားပါ
ကျွန်တော့် s4 mini မှာအဲဒါကအလုပ်မလုပ်ဘူး
ငါ download လုပ်တယ်၊ အဆင့်အားလုံးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ထားပေမဲ့ခရမ်းရောင်နဲ့အနီရောင်အရောင်နှစ်မျိုးကတော့မပေါ်ပါဘူး။ သာခရမ်းရောင်နှင့်မျှမတို့နောက်ထပ်တိုးတက်မှု။ တစ်စုံတစ်ယောက်ငါ့ကိုကူညီမလား
ကျွန်ုပ်ဖုန်းသည် Samsung Galaxy Galaxy ကျော်ကြားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်အလွန်တန်ဖိုးထားမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ် root မလုပ်နိုင်ပါ
ငါ၏အ daytona အတွက်အလွန်ကောင်းသောဒါပေမယ့်ငါ ap ကိုဖျက်ပစ်
Samsung Galaxy S4 mini မှာအလုပ်လုပ်ပါသလား။
သူကဆယ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်မသိသောတစ်ခုတည်းသော app သည် supersu ကိုသုံးရန် app ကို disable လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါ့မှာ android 4.1.1 ရှိတယ်။ ငါ့ကို disable လုပ်ဖို့ option မပေးဘူး။ သငျသညျငါ့ကိုနှင့်အတူကူညီနိုင်လျှင်, ကြီးသောလိမ့်မည်။
i-call ၃၅၀ ရှိသူတစ်စုံတစ်ယောက်သည် APP ဖိုလ်ဒါရှိဖိုင်အားလုံးကိုမိတ္တူကူးရန်လိုအပ်သည်။ သင်မိုဘိုင်း၏မှတ်ဉာဏ်ကိုသွားရန်လိုအပ်သည်။ SYSTEM / APP လမ်းကြောင်းသည်ကျွန်ုပ်ဖိုင်များစွာကိုဖျက်ပစ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုမှတ်ထားပါ၊ ငါ့ကိုအမှားအယွင်းတွေအမြောက်အများပေးတယ်၊ ငါ့ကိုတစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ရဲ့ဖိုင်တွဲ၊ ငါ့အီးမေးလ်ပေးရင် ကျေးဇူးပြု၍ ရတယ် pjuanjo_1@hotmail.com
၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ကူညီပါ။ ကျွန်ုပ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်းအဆုံးတွင်၎င်းသည်ခရမ်းရောင်ခလုတ်ထက်မကပါ။ ထိုမှအနီရောင်တစ်ခုထက်မပိုပါ။
ဆန်တီယာဂို မာကို့စ် ဆိုရီယာ ပရီတီ ဟုသူကပြောသည်
အဆုံးမှာတော့မာစတာကို uninstall လုပ်ပြီးစူပါက ၁၀ ယောက်ကိုပြေးနေတယ်။ root Checker က၎င်းသည်အမြစ်တွယ်နေသည်ဟုပြောပြသည်။ apps တွေကို hibernation ထဲထည့်လိုက်တဲ့ greenifie ကိုကျွန်တော် download လုပ်ပြီးပြီ။ ကျွန်မရဲ့ alcatel ကို touch idol မှာ run လိုက်ပြီ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုအမြစ်တွယ်ဖို့မအားပေးခဲ့ဘူး။ ဖရန်စစ္စကိုသတိပေးထားသည်မှာဆဲလ်ဖုန်းအားလုံးသည်ဤစနစ်နှင့်အမြစ်တွယ်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ အာဂျင်တီးနားမှကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်။
santiago marcos soria preiti သို့ပြန်သွားပါ
ငါ့ sony sp အတွက်သဟဇာတလား?
အက်ပလီကေးရှင်းကကျွန်တော့်ကိုအပြည့်အဝအကျွေးပြုသည်၊ ကျွန်ုပ်တွင် Samsung S4 ရှိပြီးကျွန်ုပ်မေးခွန်းမှာဖုန်းကိုအမြစ်တွယ်ပြီးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အက်ပလီကေးရှင်းကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ပါသလား။
ငါ xperia L ကိုအမြစ်တွယ်ပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ သို့သော်နဂါးငွေ့တန်း s3 mini တွင်ခရမ်းရောင်ခလုတ်တစ်ခုသာရှိသည်။
ငါ install လုပ် moto g ရှိတယ်၊ ခြေလှမ်းတွေနောက်လိုက်တယ်။ ခရမ်းရောင်ခလုတ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်၊ နှိပ်လိုက်ပြီးတရုတ်အက္ခရာတွေပေါ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါက sdcard နဲ့ root ကိုဖတ်တယ်။ ငါ root checker ကိုသုံးပြီးငါ့ဟာ root မဟုတ်ဘူးဆိုတာငါ့ကိုပြောတယ်။ ။ ငါလုပ်သကဲ့သို့
ဒီပရိုဂရမ်ကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမလဲ Samsung galaxy s III mini ကိုကျွန်တော်မွမ်းမံနိုင်ပါပြီ
Carlo Coello ဟုသူကပြောသည်
XPERIA Z Ultra ငါခြေလှမ်းများနောက်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ခရမ်းရောင်ခလုတ်တစ်ခုသာတွေ့ရသည်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်တစ်ခုသာမဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်အမြစ်တွယ်နေသည်ဟုတ်မမှန်စစ်ဆေးသည်။ မည်သူမဆိုအခြားရွေးချယ်စရာသိလား
Carlo Coello အားပြန်ကြားပါ
သင်သည် root အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းကိုမွမ်းမံနိုင်ခြင်းသည်၎င်းအားဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် pc ကိုသာအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်မွမ်းမံနိုင်သည့်အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဟယ်လိုသည် galaxy pocket plus 4.0.4 နှင့်အလုပ်လုပ်သည်
များစွာသောလူတို့၏တူညီသောအရာသည်နောက်ဆုံးအဆင့်၌ဖြစ်ပျက်သည်ကိုတွေ့မြင်ရပြီး၊ ဖိထားသည့်အခါဘာမှမလုပ်ဘူး ... ခရမ်းရောင်ခလုတ်တစ်ခုသာပေါ်လာသည်။ root သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ငါနဂါးငွေ့တန်းကျော်ကြားမှုရှိသည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
android နှင့်အတူ galaxy s4 mini ကို root လုပ်နည်း 4.2
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ် Alcatel one touch m, pop (520) တွင်ကျွန်ုပ်အတွက်ပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်သည်။
ငါတခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ကြိုးစားပြီးသားလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါ့အတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းကမင်းအတွက်ငါ့အတွက်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲ worked
naa အတွက် s4mini ကမပေးပါဘူး, အဆုံးမှာခလုတ်2ရှိပါတယ်
ဒါကလိမ်တယ် ..... manga de boludos al fado
ငါသည်ငါ၏ alcatel အပေါ်ပြုသကဲ့သို့ငါမဟုတျကွောငျးသငျသညျအာမခံနိုင်ပါတယ်။ ငါကစစ်ဆေးပြီး superuser ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည့် app များကိုအသုံးပြုသည်။
ဟေ့သူငယ်ချင်းက Android9နဲ့ lg l4.0 အတွက်အလုပ်လုပ်သလား။
sd applications များကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်ရွှေ့ပြောင်းရန်ကျွန်ုပ်၏အစီအစဉ်သည်၎င်းသည်အဆင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်နေစဉ် rott ဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်ဆဲလ်အော်ပရေတာ၏ application များကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသည့် xperia မှဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်သည်။
ဟေ့၊ ငါနောက်ထပ် superus တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်တယ်။ application ကပေးတဲ့တစ်ခုကငါ့ကိုသုံးခွင့်မပြုဘူး။ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
ငါသင်ထည့်သမျှကိုလုပ်ပြီးပြီ။ ငါ့မှာ root checker နဲ့အမြစ်တွယ်နေပြီလားစစ်ဆေးချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် "ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး" ဒီကိရိယာကသင့်တော်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုမသွားနိုင်ဘူး
ငါ့မှာ tablet acer iconia B1-A71 version 4.2.1 ရှိတယ်
တစ်စုံတစ် ဦး က၎င်းကို xperia m (c1904) တွင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းမော်ဒယ်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်ရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်သိလိုသည်
ဘာလို့ EXE format နဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရတာလဲ။
ကျွန်ုပ်၏ Samsung galaxy pocket neo တွင်အလုပ်လုပ်သည်မှာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်မှာ root ကျေးဇူးတင်ပါသည်
မှတ်ချက် - Samsung Galaxy galaxy ကျော်ကြားမှုအတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အမည်မှာဘရိုင်ယန်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏အကူအညီတောင်းခံလိုပါသည်။ ပြissueနာမှာကျွန်ုပ်သည်ဤအက်ပလီကေးရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုထည့်သွင်းသောအခါကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ် s4 အမြစ်ကိုသာမက root ပြုလုပ်ပြီးပါက ငါအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာသိတဲ့အခါငါဖယ်ထုတ်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမလုပ်နိုင်ဘူး။ ငါဘာလို့ဒီလိုမလုပ်နိုင်တာလဲ၊ မင်းဒါကိုငါ့စက်ထဲကနေဖယ်ထုတ်ပစ်ဖို့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့သင်မေးချင်ခဲ့တယ်။ မင်းကိုကူညီနိုင်တယ် ..
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အမည်မှာ Brian ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏အကူအညီကိုတောင်းခံလိုသည်။ ပြissueနာမှာကျွန်ုပ်သည်ဤအက်ပလီကေးရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုထည့်သွင်းသောအခါကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ် s4 ကို root လုပ်ရုံသာမကတစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်သည် ၎င်းကို install လုပ်ပြီး၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ကြောင်းသတိပြုမိသောအခါ၎င်းကိုဖယ်ထုတ်ရန်အလိုရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်ဤသို့မလုပ်နိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏စက်မှဖယ်ထုတ်ရန်မည်သို့လုပ်နိုင်သည်ကိုမေးမြန်းချင်ပါသည်။ ငါ့ကိုကူညီပေးပါ ..
ငါ၏အ Alcatel One touch 918-D ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ခရမ်းရောင်ဘားရှည်ရှည်ကိုရရှိသည်၊ သို့သော်အနီရောင်မရှိသည့်အပြင်အခြားဘာမျှမလုပ်ပါ။ ငါပေးနှင့်ဘာမျှမ။ ငါနှိပ်တဲ့အခါငါစာတချို့ရပါတယ်။ အရမ်းဆိုးတာပဲ၊ ငါကအခြားနည်းလမ်းတွေသုံးမယ်
အကယ်၍ သင် android4နောက်ပိုင်းတွင်မဟုတ်ပါကဤမှတ်တမ်းသည်သင်၏ alcatel တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။
florentine obando ဟုသူကပြောသည်
ဘယ်စာမျက်နှာမှာ download လုပ်လို့ရမလဲ
Florentino obando သို့ပြန်သွားပါ
> ။ <HTC VIVID တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ ၎င်းသည်ဆဲလ်ကိုသာ format လုပ်သည်
ငါ၏ lg L7x တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ ခရမ်းရောင်ခလုတ်တစ်ခုသာထွက်လာပြီး၎င်းသည်အမြစ်မကျပါ
ဗိုလ်ကြီး Whipala ဟုသူကပြောသည်
che francisco အလုပ်မလုပ်ပါဘူး ... ငါအရာအားလုံးလုပ်ခဲ့တယ် ... program ကို install လုပ်ပါ ... အဆုံးတိုင်အောင်ညွှန်ကြားချက်များအရသိရသည်အောက်ပါအတိုင်း။ ဒါပေမယ့် root checker ကကျွန်တော်က root မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်
နှင့် supersu ဖြစ်စေငါ့ထံသို့မပေါ်လာပါဘူး။ ငါ့မှာနဂါးငွေ့တန်း s3 ရှိတယ်။
Captain Whipala ကိုပြန်သွားပါ
Androidsis ကိုရှာပါ Samsung Galaxy S3 ကို Root လုပ်နည်း သင့်မှာ Root ရဖို့သတ်သတ်မှတ်မှတ်သင်ခန်းစာရှိတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဝဲလ်ကိုပိတ်ဆို့သည့် pc m dk dkdapd file virust တွင်ရှိသည်
APK အားအခမဲ့ရယူပါ ဟုသူကပြောသည်
Corduroy ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီလည်ပတ်မှုနဲ့ငါ့ကိုအများကြီးကူညီခဲ့
Free APK ဒေါင်းလုပ်မှပြန်ကြားရေး
ငါ့မှာ nova ရှိတယ်။ မင်း root နိုင်မယ်ဆိုတာငါမသိဘူး
carlos lopez အားပြန်ကြားပါ
Lenovo s960t တွင်အလုပ်လုပ်သည်
Juvenal Tarqui ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ စူပါဆူက၎င်းသည်အမြစ်တွယ်မထားဟုဆိုပါက၎င်းသည်မတည်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ root အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ တစ်ခုမှာ root user ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာ novice user ဖြစ်သည်။
Juvenal tarqui အားပြန်ပြောပါ
motorola d1 ပေါ်မှာသုံးလို့ရလား
Xperia Go ဟာအရာရာတိုင်းကိုငါကြိုးစားပြီးပြီးပြီ Root လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး
ငါ samsumg s3 international (i9300) ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်မကိုင်ခဲ့ဘူး၊ ခရမ်းရောင်ဘားတစ်ခုသာရခဲ့တယ်၊ ဘာမှမထွက်လာဘူး၊ စက်ရုပ် Checke ကိုသုံးပြီးသူကငါ့ကိုလုပ်သလိုပဲအမြစ်တွယ်မထားဘူးလို့ပြောတယ်
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်အဖြေပေးနိုင်ပါတယ်၊ ဒီ app ဟာဒီဆိပ်ကမ်းတွေနဲ့မကိုက်ညီတာရိုးရှင်းပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်နှင့် Samsung Galaxy Mega GT-I9152 အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ကိုအမြစ်တွယ်နိုင်ရန်တစ်စုံတစ်ယောက်ကကူညီနိူင်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် 4G သို့မည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကိုသိလျှင်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။ ။
ငါ့ရဲ့ဆဲလ်က android ဗားရှင်း ၄.၃၊ တရုတ်ပြည်မှာခရမ်းရောင်ခလုတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်၊ အလယ်မှာ root ဆိုတဲ့စာလုံးရှိတယ်။ framaroot မပါဘဲ pc သုံးစရာမလိုဘဲလုပ်နိုင်တဲ့အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုရှိလား။
Mario ငါ M4TEL ss1090 ရှိတယ်၊ အဲဒါငါ့အတွက်အရမ်းကောင်းတယ်
Francisco က Javier ဟုသူကပြောသည်
Samsung Galaxy နဂါးငွေ့တန်းသုံးခုအတွက်လည်းဖြစ်သည်
Francisco javier ကိုပြန်သွားပါ
ဂျိုစီမာ ဂါစီယာ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၌ဆဲလ်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်လုပ်သည်၊ ၎င်းကိုမည်သို့အမြစ်တွယ်နိုင်မည်နည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ပရိုဂရမ်များစွာနှင့်ကြိုးစားသော်လည်းမည်သို့မျှဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်ပါ
josimar garcia သို့ပြန်သွားပါ
Jorge Monsivais ဟုသူကပြောသည်
တကယ်လို့သင် Motorola X model XT1058 ကို root လုပ်နိုင်မလားသိချင်တယ်။ ငါ root ကိုမအားပေးသေးဘူး၊ ငါမတော်တဆဖျက်မိလိုက်တဲ့ဖိုင်တွေကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ဖို့အမြစ်တွယ်လာတာကြောင့်ငါ့ကိုပြန်ဖြေနိုင်ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီဟာကိုသင်အမြစ်တွယ်နိုင်တယ်
Jorge Monsivais အားပြန်ပြောပါ
MY pantech ရှာဖွေခြင်းသည် Wifi password Recovery ဖြင့် backup တစ်ခုပြန်ယူပြီးနောက် wifi ကိုမဖွင့်လိုပါ။ OS ကိုအမြစ်မှမည်သို့ထပ်မံတပ်ဆင်မည်နည်း။
မင်္ဂလာပါ။ တရုတ် apk ကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ပြီး SuperSu နဲ့အစားထိုးရမလဲ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ခွင့်ပြုချက်များကိုတရုတ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသည်။ ငါအမှတ်အသားဘယ်မှာငါနားမလည်ကြဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးအရေးပေါ်အဖြေလိုအပ်ပါတယ်
သင် SuperSu သို့မဟုတ် SuperUser ကို Play Store မှဒေါင်းလုပ်ချသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်ကတရုတ်တစ်ခုကို uninstall လုပ်ချင်လားမေးလိမ့်မည်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်မှာ Galaxy SIII mini ရှိတယ်။ အမြစ်တွယ်နေတယ်။ rooting ကပြwithoutနာမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် superSU ကိုသုံးချင်ရင်ငါ့ကိုခွင့်မပြုဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးအရေးပေါ်အဖြေပေးပါ အိုး .. နှင့် RARZ D1 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရှိသည်သောသူတို့အဘို့ဘောင်နှင့်အတူပြproblemsနာများမရှိဘဲအမြစ်။
အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတော့ path / data / app or / System / app ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတရုတ် Root application ရဲ့ apk ကိုရှာရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာတရုတ် SuperUser နှင့်၎င်းကိုမည်သည့် Root file explorer နှင့်မဆိုဖျက်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါသင် Superuser သို့မဟုတ် SuperSu ကို reboot လုပ်ပြီး install လုပ်လိုက်ပါ။
သူငယ်ချင်းများနှင့် ပတ်သက်၍၊ ငါခရမ်းရောင်မြင်ကွင်းကိုသာတွေ့ပြီးကျွန်ုပ်သည်အမြစ်ဖြစ်ပါက root checker နှင့်စစ်ဆေးပြီး၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ငါ့မှာ IBS အသေးစားရှိတယ်
Pablo Alvarez အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်မှာ Sony L ရှိပြီး၎င်းကိုအမြစ်တွယ်ချင်ပါတယ်။ သင်ပေးသည့်လျှောက်လွှာကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုပါကအဆင်ပြေပါမည်လော။ ငါ့ဖုန်းကိုမမှားချင်ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လျှောက်လွှာ galaxy note2i317m ခေါင်းလောင်းကိုမဖွင့်ပါနှင့် famroot ဖြင့်ကျွန်ုပ် gandalf ကိုသာရယူပါ
ကောင်းမွန်သောနေ့လည်ခင်း၊ lg g2 kit kat 4.4.2 ပါသောဤပရိုဂရမ်ကိုကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရာကိုပြောပြပါရစေ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကြိုးစားရန်မလိုကြောင်းသိရှိပြီးပါကကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီးအမြစ်တွယ်ပါကလိုအပ်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဂိမ်းထဲကတန်ဖိုးများကိုပြုပြင်ရန် root ch2 သို့မဟုတ်အလားတူတစ်ခုခု။ ဖုန်းကို restart လုပ်သောအခါအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး၊ နောက်တစ်ခါထပ်တပ်လိုက်သည်၊ root checker သည် root ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ အလားတူပဲလို့ခေါ်တယ်၊ ငါ super su ကို install လုပ်တယ်။ အဲဒါကငါ့ကို root မလုပ်တော့ဘူး။ ငါအားလုံးကို uninstall လုပ်တယ်။ နောက်တခါတရုတ်ကိုထပ် install လုပ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက root ပဲ။ ငါလိုအပ်တာကို install လုပ်ဖို့မြန်တယ်။ fi passwords (root တစ်ခုတည်းပါ) ကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကွက်လပ်မှသာထွက်သွားသည်။ ဤနေရာတွင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားသည်။ ပရိုဂရမ်ကကျွန်ုပ်အား Wi-Fi ကို ၄.၂ တွင် root လုပ်သည့်အချိန်တွင်ပြန်လည်မေးမြန်းရန်တောင်းဆိုသည်။ , ထိုအခြိနျမှစ။ ငါဖွင့်လိုပေမယ့်ကျနော်တို့ကပိတ်ထားသည့်အခါ, ဒါပေမယ့်လမ်းအလယ်၌, ဘယ်တော့မှမဖွင့်ခြင်းမရှိဘဲသကဲ့သို့, ဘားပေါ်တွင် Wi-Fi ကိုစောင့်ရှောက်လော့။ ငါဖုန်းကို Reboot လုပ်ထားတုန်းပဲ။ ကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ခက်ခဲသောအရာအားလုံးပျောက်ဆုံးသွားပြီး၊ ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အံ့အားသင့်စရာကောင်းသည့်ရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ပါ။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၂ ကြိမ်ပြန်လည်အလုပ်မလုပ်ချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုသို့သွားပြီး၊ end နှင့် pc မှကြိုးစားခဲ့သည့်နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုအနေဖြင့် pc suite နှင့် kit kat 4.2 ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းကြောင့်မကောင်းသော update ကိုပြုပြင်ခြင်းအတွက်ရွေးစရာကိုမတွေ့မချင်းကျွန်ုပ်အားခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ အတိအကျသတိရပါ) ငါလုပ်ခဲ့တယ်၊ ၄၄၂ ကိုအဆင့်မြှင့်တဲ့အခါငါကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါနောက်ထပ် hard reset လုပ်ပြီးပြီ။
တစ်ယောက်ယောက်ကအလားတူပြproblemနာပေါ်လာရင်ငါပြောမယ်။ Francisco ရဲ့ပါရမီအတွက်ငါမေးချင်တာကမင်းဖြစ်နိူင်တယ်လို့ထင်လား၊ ဒါက root root မကောင်းဘူးလား၊ ဒါမှမဟုတ် password program လား။ fix ကိုမပြုပြင်ဘဲ kk442 ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်လိုသလား? အာဂျင်တီးနားမှဖရန်စစ္စကိုသို့လူတိုင်းဖတ်ပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Andy Moreno ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, အရာအားလုံးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထွက်လှည့်။
Andy Moreno အားပြန်ပြောပါ
သူက Primux Zeta နဲ့အလုပ်လုပ်လားသိလား။
ငါ့ lg l3 အတွက်အလုပ်လုပ်ပါသလား 🙂
samsung galaxy s4-mini gt-19190 jelly bean ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖယ်ထုတ်ရမည်နည်း။
ငါဘာတွေဖြစ်ပျက်မည်ကိုမသိပါ၊ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကပရိုဂရမ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ဖန်သားပြင်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ root checker ကကျွန်ုပ်သည် root ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။ ယခုမူကားကျွန်ုပ်သည် root မရှိတော့ကြောင်းသဘောပေါက်။ အသုံးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ လျှောက်လွှာကိုထပ်မံလျှောက်ထားရပြီး၊ ကျွန်ုပ်မည်မျှကြည့်ရှုရန်ကြီးမားသောခရမ်းရောင်ခလုတ်ကိုသာကျွန်ုပ်တွေ့ရသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်နှိပ်လိုက်ပါက၎င်းနှင့် ချိတ်ဆက်၍ မရနိုင်သောမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်မည်သည့်နေရာတွင်မသိပါ။ ကြာချိန်ကကောင်းတယ်
George Coral ၊ ဟုသူကပြောသည်
စနစ်တကျအလုပ်လုပ်, QBEX QBA769 အပေါ်စမ်းသပ်ပြီး။ အလွန်ဖော်ရွေ။
Jorge Coral အားပြန်ကြားပါ
ရိုဒရီဂို သူရဲကောင်း ဟုသူကပြောသည်
ငါခရမ်းရောင်ခလုပ်တစ်ခုတည်းနှင့်အတူပြတင်းပေါက်အနည်းငယ်ကိုတွေ့မြင်ပြီး၎င်းသည်အမြစ်ကဲ့သို့4ကြိမ်၊ ၎င်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း
Rodrigo Caballero အားပြန်ပြောပါ
Framaroot ပျက်ကွက်ကြောင်း Bogo QC တွင်အောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ပြီး၊ ငါကအိုင်ကွန်နှစ်ခုရတယ်။ တစ်ခုက Root ကိုဖတ်တယ်၊ ဒီတစ်ခုကငါ Titaniun နဲ့ "အေးခဲသွားပြီ" ။ ပြီးတော့ SU message တွေကိုတရုတ်လိုမတွေ့ရပုံရတယ်။ အခြားအိုင်ကွန်ကိုအေးခဲသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဆက်ပြီးဆက်နေရန်လိုအပ်ပါသလား။
ဌ andres ဟုသူကပြောသည်
ငါဒီ post ပြီးသားအချိန်ရှိသည်ထင်ပေမယ့်နာကျင်မပါဘူး, မေးပါ
ငါ့မှာ xperia t2 ultra ရှိပြီး JB ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ Kitkat 4.4.3 ကို update လုပ်ခဲ့တယ်။
ဤ apk ဖြင့်အမြစ်တွယ်နိုင်ပါသလား။
ငါခရမ်းရောင်ခလုတ်ကိုရတယ်၊ ငါ့ htc mobile ကို root လုပ်ဖို့နောက် app တစ်ခုရှိတယ်
ငါ့မှာ Android 4.4 have ရှိတယ်
as လိယဟာနန်ဒက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါတယ်၊ များစွာသောလူတွေကိုအလျင်အမြန်တုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်၊ အဲဒါဟာ s3 mini မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်မမှာခရမ်းရောင်ခလုတ်တစ်ခုသာရှိပြီးအနီရောင်မဟုတ်ဘဲ၊ ကျွန်မရဲ့ android ဟာသဟဇာတဖြစ်အောင်ပြောထားတာဖြစ်ပေမယ့်အချို့အကြောင်းပြချက်များအရ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ၊
Elias Hernandez အားပြန်ပြောပါ
Manrique nerio ဟုသူကပြောသည်
Hello Francisco Ruiz la Verdad Viejo၊ မင်းရဲ့သင်ခန်းစာကငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် build.prop ဖိုင်များနှင့်ပြaနာ ရှိ၍ ၎င်းကို root မပြုခဲ့ပါ။ သို့သော်သင်၏သင်ခန်းစာအားဖြင့်အမြစ်သည်ပြီးသားဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မတိုင်မီမှားယွင်းသောဖိုင်များကိုပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ လူကြီးကဂရုစိုက်ပြီးကောင်းကြီးပေးသည်။
Manrique Nerio သို့ပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏ဖုန်း၏ဗားရှင်းမှာ ၄.၄.၂ ဖြစ်သည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အားအဆင့်များ၊ ခရမ်းရောင်ခလုတ်ကိုပင်ရရှိထားပါပြီ။ သို့သော် screenshot application တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းသည်အမြစ်တွယ်ခြင်းမရှိကြောင်းပေါ်လွင်ပါကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Edwin လိုပက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြု၍ သင် alcatel D1 အတွက်မွမ်းမံပေးနိူင်ပါတယ်။ သူတို့မကြာသေးခင်ကမှ root ကိုဘာမှမရှာနိုင်ခဲ့ပါ
Edwin Lopez အားပြန်ကြားပါ
SuperSu ကို install လုပ်ပြီးရင်ငါ binaries တွေကို update လုပ်သင့်တယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်နာရီဝက်လောက်ကြာပြီ။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ?
Android ဗားရှင်း ၄.၃
ယေရှု Mendez Ledezma ဟုသူကပြောသည်
Jesus Mendez Ledezma ကိုပြန်ပြောပါ
ငါ၌ android 4.1 ပါသောတရုတ်မိုဘိုင်းတစ်ခုရှိသည်။
Jesus Manuel ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် tablet (ငါ့သမီး၏အမှန်တကယ်) ရှိသည်။ ၎င်းတွင် "ANDROID" ဟူသောစကားလုံးပေါ်လာသည်။ သင်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘက်ထရီကုန်သွားတဲ့အထိပါပဲ။ ဘာဖြစ်တာလဲ။
Jesús Manuel အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကြီးမားတဲ့ခရမ်းရောင်ခလုတ်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းသည် SGS3 android jelly bean 4.3 ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပရိုဂရမ်နှင့်အညီသဟဇာတဖြစ်သောဗားရှင်းဖြစ်ရန်ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်မည်သူမဆိုအဖြေတစ်ခုကိုသိလျှင်သို့မဟုတ်ထိုအရာတစ်ခုခုကိုရှာပါကကျွန်ုပ်အား pls pls ကိုအသိပေးပါ။ မင်းရဲ့ဂျီမေးလ်ကဒီမှာရပ်တန့်မယ် borjalb98@gmail.com
12085151mlili + ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ root မပါဘဲ 32gb sd သို့ app များကိုမည်ကဲ့သို့ရွှေ့ပြောင်းရမည်ကိုသင်သိပါသလား ငါထောင်ပေါင်းများစွာ apps များကြိုးစားခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့အလုပ်မလုပ်ဘူး။ နောက်မှ root ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင် apps တွေကို SD ထဲဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သငျသညျဤလျှောက်လွှာနှင့်အတူသင်တန်း၏ lg g3 root နိုင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏ s4 တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကူညီသောခရမ်းရောင်ခလုတ်တစ်ခုတည်းသာရပါသည်
junior abraham အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်တော့် fnac 10 တက်ဘလက်နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်မည်သည့်စက်ရုပ်ကိုမှရှာမတွေ့ပါ။ Francisco
iet လျေ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ Cat B15 ကိုအမြစ်တွယ်နိုင်မလားသိလား။ အင်တာနက်ပေါ်မှဤ terminal အကြောင်းကျွန်ုပ်အချက်အလက်မရနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်နေရာများစွာသာရှိသော application များစွာနှင့်ပါ ၀ င်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ CEL EXPERIA ZL C6502 resp နှင့်ကိုက်ညီပါလိမ့်မည်။
တစ်ချိန်ကပြီးပြည့်စုံတဲ့ routed လို့ပြောကြပါစို့။ ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာငါဖုန်းကို Factory mode သို့ reboot ချင်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်လား။ ၎င်းသည် ဆက်လက်၍ ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်လားသို့မဟုတ်၎င်းဖွဲ့စည်းပုံပျောက်ကွယ်သွားမည်လား။
သင်ပြန်လည်သတ်မှတ်လျှင်ပြန်လည်သတ်မှတ်မည်။ အသစ်တစ်ခုလိုမင်းထပ် root လုပ်ရမယ်။
မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေ၊ ကျွန်ုပ်တွင် GT S7390L lite galaxy လမ်းကြောင်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ နောက်ဆုံးအဆင့်သည်အထက်တွင်ဖော်ပြသကဲ့သို့အတိုင်းမဟုတ်ပဲ android ဗားရှင်း ၄.၁.၂၊ အဆုံးမှာခရမ်းရောင်ခလုတ်တစ်ခုနဲ့အခြားဖန်သားပြင်တစ်ခုကိုငါရတယ်။ ပြီးတော့ supersu ဒါမှမဟုတ်အလားတူတစ်ခုခုကိုမတပ်ဘူး။
ဟင်ဖရန်စစ္စကိုကျွန်ုပ်မေးခွန်းကတော့ LG 7X android 4.4..2 ပါ ၀ င်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပါ။ အမြစ်တွယ်နိုင်ပါသလား။
Juan Sebastian Gaviria ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ samsung galaxi ကြယ်ပွင့် GT-S5282 အမြစ်တွယ်နေသလား။
juan sebastian gaviria သို့ပြန်သွားပါ
၎င်းသည် motorola motoeနှင့် Android ဗားရှင်း ၄.၄.၄ နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ သင်၏အဖြေကိုကျွန်ုပ်စောင့်နေသည်
ဂျိုဟန် ဆီဘတ်စီယမ် ဟုသူကပြောသည်
Johan sebastian အားပြန်ပြောပါ
Samsun S3, ငါခြေလှမ်းများနောက်သို့လိုက်။ အဆုံး၌ငါခရမ်းရောင်ခလုတ်ကိုသာတွေ့မြင်, ခရမ်းရောင်တ ဦး တည်းနှင့်အနီရောင်တစျခု, ငါကအမြစ်တွယ်ခြင်းနှင့်အလုပ်မလုပ်ခြင်းရှိမရှိကြည့်ရှုရန်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ တချို့အကူအညီလား
ကျွန်ုပ်သည် root master နှင့်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ပြီးတရုတ်စာလုံးများကိုဖွင့်လိုက်သည်
ယေရှု garcia ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ s5 mini တွင် ၅ ကြိမ်ကြိုးစားပြီးသည်။ နောက်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုပြီးသွားသောအခါ၎င်းကိုမဖယ်ရှားနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် root master ကိုပိတ်ပြီး root checker ထဲသို့ ၀ င်ပြီး၎င်းသည် rooted မရှိကြောင်းပြောပြသည်။
Jesus garcia သို့ပြန်သွားပါ
S Galaxy Young ကို root လုပ်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲ
ကောင်းသောနံနက်ခင်းပါ၊ Samsung galaxy tab-2 10.1 root မပါဘဲတက်ဘလက်ကိုတက်ပါ။ Android 4.2.2 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
root master ကို download လုပ်ရန် link သည်သေမင်းထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်၏ samsung galaxy s4 mini 4.4.2 ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
Luis sergio အားပြန်ပြောပါ
ခရစ်ယာန် perez perera ဟုသူကပြောသည်
အမြစ်မာစတာ link ကိုအတွက်စင်ကြယ်သောလိမ်လည်မှု၌တည်၏
Christian Perez Perera အားပြန်ပြောပါ
SuperSonic SC-91JB တက်ဘလက်ကို root လုပ်နည်း
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် rotmaster ကိုကြိုးစားကြည့်ပြီးရလဒ်သည် kingrot နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးမကျပါ။ ၄ င်းကို android4ဖြင့် galaxy s4.4.2 နှင့် Huawei mui 3.0 နှင့်စမ်းသပ်ပြီး၎င်းမှာမည်သည့်အရာ၌မှအလုပ်မလုပ်ပါ။ တစ်ခုခုကိုမအပ်နှံမီ၊ မည်သည့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကိုက်ညီသည်ကိုစစ်ဆေးသည်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုလှည့်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာကွန်ပြူတာမှတဆင့်ရိုးရာနည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာများနှင့်ဖိုရမ်များ၏မှတ်ချက်များတွင်သူတို့ပြောသမျှ စက်မှာတပ်ဆင်ထားသည့် apk ဖြင့်မည်သည့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုမှလည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်အမြဲတမ်း pc မှတဆင့်ဖြစ်သည်။ မည်သူမဆိုသူတို့မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုကျွန်ုပ်အားပြောပြရန်နှင့်မည်သည့်မိုဘိုင်း၊ မော်ဒယ်နှင့် android ဗားရှင်းအတွက်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်သည်။ အဖြေတစ်ခုငါအောင်မြင်ခဲ့ပြီမဟုတ် ...
ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းသည်အဲလ်ပ် s850c ဖြစ်၍ အမြစ်တွယ်ရန်နည်းလမ်းမရှိ။ ကျွန်ုပ်ရှိသည့်နည်းလမ်းအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးဘာမှမရှိ - - HELP!
မာရီယာ Eugenia ဟာနန်ဒက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ alcatel one touch 4033A နှင့်အလုပ်လုပ်သည်
မာရီယာ Eugenia ဟာနန်ဒက်ဇ်ကို reply
S3 LTE အတွက်လား။
alan alonso အားပြန်ပြောပါ
ROPA08 သို့၊ funker s454 နှင့် bravus 950 တက်ဘလက်တွင် samnsumg s2 တွင်သင်အခြားသူများကမသိကြောင်းမဆိုလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၊ တယ်လီဖုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်များစွာသောအရာများကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ သင်မကောင်းသည်ကိုသင်မပြုနိုင်ပါ၊ အနီရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်ကို ခွဲခြား၍ မရသောအရာတစ်ခုကိုအထက်တွင်ကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်သည်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါ့မှာ Loolypop2ရှိတဲ့ Samsung S5.1.1 ရှိတယ်။ ၎င်းသည်ရိုက်ချက်တစ်ခုနှင့်တူသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဘက်ထရီသည်ပျမ်းမျှ ၁၆ နာရီမှ ၂၂ နာရီအတွင်းကြာရှည်သည်။
သူတို့အား COOKS ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, အခမဲ့ကုန်သွယ်ရေး။
Angel Perez အားပြန်ပြောပါ
အက်ဒီဆင်ဂျေရိုမို R. ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ နောက်ဆုံး Root Master ၏ဖန်သားပြင်ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ Samsung Galaxy S4 I9500 တွင်နောက်ထပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
Edison J. Romo R. အားပြန်ကြားခြင်း
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ အက်ပလီကေးရှင်းကိုထားရှိပြီးဖယ်ရှားပါကအမြစ်ကိုဖယ်ထုတ်သည်။ ၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်နိုင်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကစူပါလိုပေမယ်တရုတ်လိုပေါ့။ အဲဒါကိုပြောင်းလို့ရလား၊ အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းရှိရင်မသိဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက် xperia s တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော်၎င်း app ကိုကျွန်ုပ်မလိုချင်ပါ။ ၎င်းကို root မထိခိုက်ဘဲဖျက်ပစ်ရန်နည်းလမ်းရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ။
ငါ fuck ဆိုတဲ့ app ကိုမ download ပါဘူး
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏ AIKUM AT792HC တက်ဘလက်ကိုမြန်မြန်အမြစ်ဆွဲနိုင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ samsung galaxy tab3(smt210) သည် Android 4.4.2 ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်ဘယ် application ကိုသုံးလို့ရမလဲ ???
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ဂိမ်းတစ်ခုကို hack ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ AVATUS MUSIK ဖြစ်သည့်ဤဂိမ်းကို hack လုပ်ရန်သင်လည်းကူညီပါကသင်က၎င်းကို play store မှကူးယူနိုင်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ အမြစ်တွယ်နေသောဆဲလ်ဖုန်းတွင်ကျွန်ုပ်သည် hack ကိုသုံးသော်လည်းကျွန်ုပ်အတွက်မည်သည့်အရာကမျှအလုပ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ။
Crisgame သို့ပြန်သွားရန်: 3
ဟယ်လိုသူငယ်ချင်းများခင်ဗျားကကျွန်တော့်ကို Samsung Galaxy GALAXI TRED LITE နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော့်ကိုပြောပြနိုင်ရင်ခင်ဗျားကိုမေးချင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော Campos ဟုသူကပြောသည်
Root Master အိုင်ကွန်ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့များစွာသောငါ့ထံသို့ပေါ်လာလို့ပဲ
Agoos Campos ကိုပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါဖရန့်၊ ကောင်းသောညပဲမင်းငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ ကျွန်မခင်ပွန်းကငါ့ကိုအခြားစက်သို့မဟုတ် pc မှမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့် watsap အားလုံးကိုဖတ်တယ်။ သူမှာ root (သို့) တစ်ခုခုရှိတာကိုသူကငါ့ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားနိုင်မလဲဆိုတာကိုသူကြည့်နေတယ်ဆိုတာပြနေတယ်။ ကျွန်တော့်ဆဲလ်ဖုန်းမရှိတော့ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဤအချက်သည်စိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
san pateste အားစာပြန်ပါ
hi francisco ကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်မှာ Samsung Galaxy galax sm-g531f x ရှိတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ်ဘယ်လိုအမြစ်ကို root နိုင်အောင်ကူညီနိုင်မလဲ ကျေးဇူးပြု၍ x
ငါဒေါင်းလုပ်ဆွဲရတယ်ငါ့ဖုန်းကိုထားရမယ်၊ ငါမလိုချင်ဘူး၊ မဟုတ်ရင်ငါ့ကိုဒေါင်းလုပ်ချခွင့်မပြုဘူး !!! ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ?
ငါ Samsung Galaxy Trend2Lite ကိုအမြစ်တွယ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းမရှိဘူး။ ငါနည်းလမ်းပေါင်းတစ်ထောင်နီးပါးကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီ။ တစ်ယောက်ယောက်ကအဲဒီကိုသွားပြီးသူ့ကိုနမ်းဖို့ပြောရင်
ကောင်းပြီဒီတစ်ကြိမ်မှာပင်ကျွန်ုပ်သည် Samsung S7 ကို pc မသုံးပဲ root လုပ်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ S7 သည် Android 7.0 ဖြစ်ပြီးအမြစ်များစွာကြိုးစားသော်လည်းကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Dayan Llanos အားပြန်ပြောပါ
Julio Cesar ဟုသူကပြောသည်
ငါ၌ adroid6ပါသော Huawei Y6.0 II ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်နည်းလမ်းများစွာကိုကြိုးစားခဲ့ပြီး၎င်းသည်အမြစ်တွယ်ရန်အလွန်အားကောင်းကြောင်းပြောကြသည်
Julio Cesar ကိုစာပြန်ပါ
အလက်ဇန်းဒါး coila ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ lg x max သည်လမ်းကြောင်းမထားဘူး၊ ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်နိုင်သနည်း။
Alejandro coila အားပြန်ပြောပါ
p8 lite အတွက်?
Merge Mon, အားပျော့သောပဟေRိတစ်ခုဖြစ်သော RPG ကို အသုံးပြု၍ သင့်အားပိုမိုကြီးမားသောစွမ်းအင်များဖန်တီးရန်အတွက်သင်၏နဂါးများကိုပေါင်းစပ်ရန်ရှိသည်